Debian naRichard Stallman. Pa 17th mhedzisiro yevhoti ichazivikanwa. | Linux Vakapindwa muropa
Debian naRichard Stallman. Pa 17th mhedzisiro yevhoti ichazivikanwa.
MuLinux Vakapindwa muropa isu tanga tichitevera dzimwe nzira dze Kudzoka kwaRichard Stallman kuFree Software Foundation kubva pakutanga. Mumwe wangu Darkcrizt hizo rakanyanya basa rakanaka kuongorora rutsigiro uye kushorwa kunoitwa nechiitiko. Chimwe chazvo chaive chiitiko mukati meDebian Project.
Debian naRichard Stallman
Handisi kuti zvine chekuita nazvo, asi, hukama pakati peiyo projekiti uye muvambi weFree Software Foundation kwaive nekusawirirana kwavo. Debian aigara achifungidzirwa semhare yemahara software yekuparadzira, asi yeRMS yanga isina kukwana.
Chokwadi ndechekuti Steve Langasek, anoshandawo kuCanonical, kambani iri kuseri kweUbuntu, yakapa gadziriso yakajairika yenhengo dzeDebian Project kujoina kusaina kweiyo tsamba iripo kuti anoda kuti Stallman abve uye bhodhi yeFSF idzingwe.
Vhoti ichiri kuenderera uye Mhedzisiro yacho ichazivikanwa musi waApril 17.
Vhoti vanogona kusarudza kubva pamatanhatu sarudzo:
Kurayira kusiya basa kwekomiti yese inotungamira (Izvi ndizvo zvinokumbirwa netsamba yekutanga)
Kumbira kusiya basa kwaStallman kubva chero chinzvimbo mukati meFree Software Foundation.
Rasa chero mhando yekubatana neFree Software Foundation apo Stallman ari munzvimbo yekutarisira.
Kumbira FSF kuti ivandudze nzira dzayo dzehutongi.
Tsigira kudzoreredzwa kwaRichard Stallman.
Mhan'arira muroyi achivhima Stallman
Iko kune zvakare imwe sarudzo yekuita chero chinhu.
Sam Hartman, aimbova mutungamiri webasa reDebian, uye mumwe wevasayina chikumbiro chekusiya basa chaStallman, kudzikisira rutsigiro rwemunhu ane ndebvu mukati mekambani
Chikumbiro chekusaina tsamba yekutsigira kuna Richard Stallman chakaunzwa munaKurume 26 uye vakawana yekupedzisira inodiwa kubvumidzwa musi waApril 1 (mazuva matanhatu gare gare uye mushure menguva diki yekukakavadzana yapera) Ichi chirevo chakatora mazuva akati wandei kuti awane mashoma mashanu zvinotsigira zvakakosha kuti zvionekwe mukati mevhoti.
Pane zvakasiyana, chirevo chekubvisa chakawana rutsigiro rwakakodzera mune isingasviki awa.
Dai mumwe wevatsigiri vechimwe chikumbiro pavhoti akadaidzira vhoti kare (sekubvumirwa kwebumbiro redu mushure menguva pfupi yekukurukurirana), chikumbiro chekusaina tsamba yekutsigira Stallman chingadai chisina kuvhota.
Kuti utariswe seizvi zvezvirevo unofanirwa kusvika pachikwata panguva yekuvhota. Ndokunge, vanogadzira makumi mashanu vanofanirwa kuzvibvuma.
Kune kuravira kwangu, Hartman ainyanya kuregerera kune avo vari munzvimbo yakapesana:
Isu takaona mazhinji mameseji mukutsigira Stallman pane edu zvinyorwa. Handina kutarisa manhamba. Iko kunoratidzika kuve kune vashoma vanhu vanonyora toni yemameseji kukurudzira vanhu kuti vatsigire yavo chinzvimbo.
Zvinoita zvine musoro kuti vatsigiri veStallman vapedze nguva yakawanda vachiratidzira. Vaya vakakumbira kusiya basa vakawana zvavaida pakatanga chirongwa ichi. Sarudzo yake yaive yatove pabepa.
Nekunyora mizhinji meseji, vanotsigira kuregedza basa vanorebesa izvo zvakaoma uye zvinoshungurudza maitiro Handifunge kuti ndini ndega ndaida kuisa pfungwa pakunatsurudza zvinyorwa zvesarudzo zvandakatsigira uye kurega vavhoti vachizvisarudzira.Ini ndinofunga zvakakwana isu tine ruzivo naStallman kuzvisarudzira.
Hartman akati arangarire izvozvo mazhinji emameseji ekutsigira Stallman anobva kuvanhu vaive vasiri vagadziri veDebian uye saka havana mvumo yekuvhota.
Musi wa17 tichaona zvinoitika, kwenguva, nhamba chete inozivikanwa inoratidza kuti kubviswa kunotsigirwa nemasangano makumi matanhatu nenomwe nevanhu zviuru zvitatu nemakumi matatu nevatanhatu, tisingaverenge gumi nematanhatu akasaina. Masangano gumi nemana aburitsa zvirevo zvavo, vese vachidaidzira kuti Stallman abve.
Vatsigiri vaStallman vaendesa tsamba yavo yekumukumbira kuti arambe ari mubhodhi. Kubva pakuendesa kwayo, hwerengedzo yemasiginecha 5620 akawanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian naRichard Stallman. Pa 17th mhedzisiro yevhoti ichazivikanwa.
Colony Ship: Post-Earth Colonization Inouya kuLinux
Mamwe marongero kubva kuMautic. Platform yekushambadzira kwedhijitari